Ibangela ingxokolo inkunkuma | News24
Ibangela ingxokolo inkunkuma
Induli yenkunkuma phakathi kwamatyotyombe iNeva-Neva.IMIFANEKISO: UNATHI OBOSE
Abahlali kwiingingqi zamatyotyombe eNyanga, Gugulethu, Lower Crossroads kunye nase Phillipi, balugcwabevu ngumsindo yinto abathi kukungakhathalelwa ngabasemagunyeni.
Esi simbonono sibangelwa kukungaqokelelwa kwenkunkuma kwiindawo zabo, nto leyo bathi ingabangela ukunwena nangakumbi kwentsholongwane ye Khorona. Ngokweengxelo sele kuqingqithe iinyanga ezimbini iqhuba le meko.
Umhlali nokwayinkokheli kumatyotyombe ase Neva-Neva, ePhilippi, uNowethu Sawutana uchaze imeko abahlala phantsi kwayo nanje ngemaxongo. Uthi kunzima nokuvula umnyango ngoba kuyanuka kwaye iimpuku zingena zibaleka ezindlini.
Ubongoze abasebenzi bakamasipala ukuba baphume iphulo baqokelele inkunkuma ukusindisa impilo yoluntu. “Kwezihoki zimelene neziindawo kulahlwa kuzo inkunkuma iimpethu zingena ezindlini xa kushushu. Bathi abantu behleli ngaphakathi ezindlini babone iimpethu zihamba emadongeni,” uthethe watsho uSawutana.
Waleke ngelithi abahlali basematyotyombeni bajongene noxanduva olunzima lokuzikhusela kwintsholongwane iKhorona nakwezinye izifo eziza nokukungcola.
Umhlali kumatyotyombe ase Phase Two eLusaka, eNyanga, uNolulamo Mthambeka uthe nabo baleqa inyanga yesibini bejongene nale meko.
“Kunuka yonke indawo ngoba abantu balahla nezinja ezifileyo,” utshilo uMthambeka.
Uqhube wathi akaqinisekanga ukuba kutheni ingasathuthwa inkunkuma. Uthe kuyo yonke le meko baphila phantsi kwayo ucingela abantwana abancinci, ngoba badlala kule nkunkuma. “Asikhuselekanga konke konke ngoba umoya esiwuphefumlayo umdaka,” uthethe watsho uMthambeka.
Ukanti uBulelani Mnukwa ohlala eSiyahlala uthe udanile yindlela urhulumente aqhuba ngayo, ingakumbi kwiindawo zabantu abantsundu. “Akukho nengxelo esuka kwiinkokheli zethu ukuzama ukusazisa ukuba kwenzekani. Sibona nje thina inkunkuma ingaqokelelwa asimazi unobangela,” utshilo uMnukwa.
Uthe le nkunkuma ibisele ikhona ngethuba kuqala iziyunguma zokuphela konyaka. “Ndimke apha eKapa ngoLwesibini umhla wama 22 kwinyanga yoMnga ndiyishiya ilapha le nkunkuma. Ndiphinde ndabuya ngeCawe umhla wesithathu kule nyanga sikuyo ndafika isekhona. Njani kusithiwa kukho intsholongwane egqugqisayo kodwa abantu bahlaliswe enkunkumeni,” ubuzile uMnukwa.
Ilungu lekomiti ka sodolophu kwicandelo lezamanzi nelindle uXanthea Limberg uchaze ukuphela kwesivumelwano sengqesho phakathi kwesiXeko nenkampani ibicoca njengonobangela.
Esi sivumelwano siphele ekupheleni kwenyanga yoMnga, ukanti inkampani entsha ebekufaneleke ukuba iqalile kule nyanga isanqunyanisiwe okumzuzwana emva kokuba iinkampani ebezigacele lo msebenzi ziye zabhena.
“Okwalomzuzu ukuqinisekisa ukuba iinkonzo ziyafikeleleka ebantwini icandelo lezokungcoliseko nelindle liye lacela ukuguqula isivumelwano eso sengqesho kube kufunwa iinkampani ezizobe zisebenza ngelixa kusaxoxwa,” utshilo, wongeza ngelithi kuchongwe iinkampani zethutyana ukuba zenze lo msebenzi.
Uchaze ingxelo yabahlali nabathe sele ileqa iinyanga ezimbini inkunkuma ingasaqokelelwa nenje ngebubuvuvu, watsho esithi ukungacocwa kwenkunkuma kuqale ngomhla wokuqala kweYomqungu, kodwa isiXeko siye saqala ukuyicoca kwakhona ngoLwesihlanu umhla we 8 kule nyanga.
37% - 2456 votes
26% - 1758 votes
37% - 2447 votes